Inona ny famaritana ny famantaranandro marani-tsaina miaraka amin'ny fampisehoana tantera-drano? Azo atao ve ny mijanona maharitra amin'ny rano? Raha ny marina, ny sokajy vokatra elektronika tsy misy vovoka sy tantera-drano dia matetika b ...
Inona no atao hoe mpanara-maso ny tahan'ny fo?
Ny antsoina hoe maso tahan'ny fo dia famantaranandro izay afaka mirakitra marina ny fitepon'ny fontsika amin'ny fotoana tena izy mandritra ny fanatanjahan-tena. Ny anjara asan'ny maso tahan'ny maso amin'ny fanatanjahan-tena misy tanjona dia miharihary. Misy fitsipika roa mahazatra amin'ny fandrefesana ny tabilao amin'ny fo: ny iray dia ny aretim-po ...
Ahoana ny fomba fikolokoloana fehin-tànana marani-tsaina?
1. Ataovy madio hatrany ny fitaovana marani-tsaina. Diovy tsy tapaka ny tananao sy ny fehin-tànanao maranitra, indrindra aorian'ny fampihetseham-batana, hatsembohana, na fifandraisan'ny hoditra amin'ireo zavatra toy ny savony na detergent. Ireo akora ireo dia mety miraikitra amin'ny atin'ny peratra; Aza mampiasa detergent ao an-trano hanadiovana ny bracelet. Aleo kosa mampiasa ...
Inona ilay antsoina hoe Smart Bracelet? Inona no ataon'ny Smart Bracelet?
Ny peratra tanana marani-tsaina dia fitaovana marani-tsaina azo ampiasaina, ny mpampiasa rehefa avy nanao fehin-tànana marani-tsaina tsara, ny mpampiasa dia azo noraketina tamin'ny fampihetseham-batana tanana amin'ny fiainana andavanandro, toy ny data sy ny angona fatoriana ary ny data finday ihany koa. na fitaovana informatika, ary avy eo thr ...
Ireo fitaovana finday maranitra dia manomboka amin'ny vanim-potoana vaovao fitantanana fahasalamana
Ny valan'aretina dia mitaky ny fitakiana fahasalamana, ary ny tsena azo ampitaina dia mikendry ny fahasalamana amin'ny ho avy Miaraka amin'ny fampahafantarana ireo fitaovana arahin'akanjo maranitra, ny foto-kevitra momba ny fitantanana ara-pahasalamana dia nalain'ny besinimaro kokoa. Araka ny fanadihadiana iray nataon'ny Oniversite Stanford, ny angona nangonin'i wearabl ...
Ahoana ny fampiharana insallation & fifandraisana Bluetooth
Tadiavo azafady ny APP ao amin'ny Google Play amin'ny finday Android na fivarotana APP amin'ny iphone; Na scan ny kaody QR amin'ny smartwatch mba hisintomana sy hametrahana APP. Azafady, mariho tsara fa ny Android dia manohana ny 4.4 sy ny ambony; ny IOS dia manohana ny 8.0 sy ny ambony; Hardware Bluetooh 4.0 sy ambony. Afatory smartwatch, kitiho ny fisafidianana o ...